Ko kana maBloggi akaenderera mberi nekurova? | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 23, 2007 Mugovera, Mbudzi 24, 2007 Douglas Karr
Pandinonyora posvo seizvi, ndinonzwa kunge ndine chokwadi chekutsamwisa iyo Google Masimba-iwayo-ave. Kugona kwangu blog kuita 'kuwanikwa' ndiko kiyi yekubudirira kwayo. Muchokwadi, inopfuura hafu yevashanyi vangu vanobva kunjini dzekutsvaga zuva nezuva, ruzhinji kubva kuna Amai Google. Ini ndinoshanda nesimba kuti ndive nechokwadi chekuti ndinoisa pasi kapeti tsvuku yeGoogle nezvose zvinoyemurika nemamiriro ezvinhu anoita kuti vanyemwerere pamusoro pangu.
Google yakaisa pasi gauntlet pamusoro vazhinji vanhu vechirango che 'vanobhadharwa ma link' mukati mezviri mukati. Vamwe vakatove akamanikidzwa kunyora uye kushambadza tsamba yekuzvipira.
Asi ndiri kukura ndaneta nazvo. Usandibata zvisirizvo, ndichiri kutya zvikuru Google uye ndinoshandisa zvavanoshandisa mazuva ese Ivo ikambani isingafadzi uye ndinofara kuti kuvapo kwavo kunoita kuti vamwe vakuru-vakomana vatarise mabhurugwa avo. Chimwe chezvikonzero chinoita kuti ndide Indaneti ndechekuti ingangoenzana.
Mari yakaita sei Google kubva paBlog ino?
Ini ndanyora pamusoro pe1,000 zvinyorwa pane ino blog uye ndine vangangoita 500 vashanyi pazuva kubva kuGoogle. Ngatitii, kungoitira nharo, kuti Google inoita masendi gumi kamwe chete pakutsvaga gumi. Saka zvekutsvagirwa mazana mashanu kwandakauya, paive nekutsvagirwa makumi mashanu kwakabhadharwa chinongedzo, zvichienzana ne $ 10. Kuti ndive akarurama kuGoogle, ndinongova 10 chete pa500 mhedzisiro pane peji, saka ngatitii ini ndinobatsira kupa masendi makumi mashanu kune yepasi pezasi yeGoogle. Pakupera kwegore, pamwe ini ndakabatsira Google mukugadzira $ 50.
Ini ndinoona ichi chipenga masvomhu, asi poindi yangu ndeiyi… tinonyora zvemukati zvinonongedza zvakanaka kuGoogle… uye Google inokwanisa kutengesa zvakabhadharwa zvinongedzo zvichibva pane izvo zvirimo. Google inoita mari kubva mukugona KWEDU kunyora zvakakura zvemukati uye index zvakanaka, asi isu hatibvumidzwe kuwedzera izvo zvemukati pachinzvimbo chevamwe. Chii chinoita kuti saiti yangu inakidze kune vanoshambadzira haisi yekuverenga chete, zvakare iri Injini Yekuisa kuiswa. Google iri kutaura kuti vane chinzvimbo chedu, kwete isu, kunyangwe isu tiri isu takaita basa rakaomarara kuti tisvike ipapo!
Google Kuuraya Makambani Anobaya
Companies like PayPerPost ichaendeswa pasi, uye vamwe vakaita Chinyorwa Link Ads ndakamanikidzwa kuenda pasi pevhu. Google yatanga hondo uye yakagadzirira zvizere kurwa nayo isu tese nekuti tingave tiri kukanganisa yavo yepazasi mutsara.
Asi hatina kubatsira kutyaira iro repazasi mutsara? Ndinofunga takaita! 75,000,000 mablogiki paInternet ari kutyaira TON yezvakanaka zvemukati kune Google pasuo. Panzvimbo pedu kutarisira chimwe chinhu kudzoka kubva kuGoogle, tinokumbira uye tinonamata kuti vatiratidze zvakanaka uye kazhinji.
Iyo Dewey Decimal Sisitimu
Google ichiudza mabloggi izvo zvavanogona uye zvavasingakwanise kuita nemablog avo zvingaite seDewey Decimal System ichiudza vanyori zvavanogona uye vasingakwanise kunyora mumabhuku avo.
Google ichirova yakakomberedza mamablogi mashoma akabhadhara ma link inzira inozivikanwa inozivikanwa inowanzoshandiswa nevadzvanyiriri uye vatenzi vevaranda. Dhonza vashoma vanopokana kubva muzvikwata uye uvape zvakanaka kurova… uye vamwe vese vacharamba vachishanda uye vanyarara.
Dewey kuMunyori, "Mumwe munhu akabhadhara kutaurwa mubhuku rako? Ndine urombo Mr. Munyori, tiri kukudhonza kubva kuindekisi. Kana vanhu ivavo vachishuvira kucherechedzwa, vaudze vatibhadhare uye isu tichavagovera nzvimbo yavanoda. ”
Munyori, "Saka ndinofanirwa kuita mari sei?"
Dewey, "Zvakanaka, nekuve mune yedu index iwe unenge uchiwana vakawanda vaverengi."
Munyori, "Mira, izvozvo hazvizokubatsire kuramba uine chinzvimbo chiri nani chinokwezva vaverengi vazhinji uye, semhedzisiro, kutengesa zvimwe zvigadzirwa zvako?"
Dewey anoseka, "Chokwadi kuda! Asi kana mukasatiteerera, hapana munhu anenge achiverenga bhuku renyu. ”
Ini handisi kutaura, zvachose, iyo Google chikwereti ini. Ini ndinongotenda uyu ndiwo mumwe muenzaniso mukuru wekambani zvine usimbe kuyedza kuchengetedza yekutanga mari sosi nekurovera pamurume mudiki. Panzvimbo pekukudziridza zvirinani nzira dzekuongorora mamiriro ezve data uye kupatsanura akabhadharwa zvinongedzo maringe ne organic mahukama, Google iri kutora nzira iri nyore.
Heuno mubvunzo, ko kana tikaenda "On Strike"? Ko kana iwo 75,000,000 mablog akafunga kukanda robhoti faira uye kumisa Google kubva kuinongedzera ivo… ese! Chii chingasara neGoogle panguva iyoyo? Ivo vangasiiwa neinoburitswa nevekuburitswa uye webhusaiti mawebhusayithi Pakupera kwezuva, iwo haasi iwo akabhadharwa ma link? Google ingave iripi pasina isu?
Ndinoziva kwandingave ndisina Google, zvakadaro, saka ndichave mushandi akanaka uye ndinoteedzera iyo mirairo.
Ini handifanire kuda mirau, zvakadaro.
Tags: kuongorora kwegeosocialinfluencer analyticsmultidomainmutsikisimanzwiro ongororoSlidersocial crm kusanganamagariro enhau analyticsvideo monitoringkuongorora kwehutachiona
Inofanira Webhu 2.0 Dhizaini Inofanira Kubviswa?
Nov 24, 2007 pa12: 43AM
izvi zvinondiyeuchidza nezvechinyorwa chandakanyora rimwe zuva
ibhokisi ravo rejecha uye kudzamara imwe-ine bhokisi rejecha riri nani yauya… mushe kufungidzira kuti tinofanirwa kutamba nemitemo yegoogle
Nov 24, 2007 pa8: 27AM
Ini ndinofunga kana iwe uri kuvimba neyako index renzvimbo yekutyaira traffic nzira yako kuti iwe ugone kuita bhuru iwe unenge wakanakira kutamba mutambo weGoogle. Kana zvimwe, sekutaura kwawakaita, isa mune imwe kodhi inoudza marobhoti eGoogle kuti aende.
Maitiro angu ekutanga aingova… wadii kunyora zvirinani zvirimo kuitira kuti vanhu vakusvitse pane yako feed feed? Handina kumbobvira ndatsvaga ndikawana blog yako asi ndakazviona zvichitaurwa pane mumwe munhu elses blog wandinoda uye ndikazviwedzera kumuverengi wangu.
Imwe yekukurumidza nzira yandinoziva yekutyaira zvemukati kunyora zvisizvo nezve chimwe chinhu. 😉 Ini ndinogara ndichiwana gumix yemigwagwa kana ini ndobatidza chimwe chinhu zvinopesana nekungonyora "B" zvemukati zvemukati.